Fursadaha Xirfadaha ee ku xigta Sameynta Shahaadada CCNA ITS
Fursadaha Xirfadaha ee ku xigta Sameynta Shahaadada CCNA
Shahaadada Cisco CCNA waa udub dhexaad u ah xirfad wax ku ool ah oo ka dhexjirsan noocyada ugu caansan ganacsiga. Cisco Systems waa horyaal ka mid ah kuwa soo saarayaasha ugu caansan, kuwa asal ahaan ka soo jeeda, iyo ganacsatada Rugaha Isgaadhsiinta iyo Furaha. Cisco waxa ay maamushaa 'Network of Human' oo ballaaran - qaab heer sare ah oo sarreeya oo heer sare ah oo qaabeeya qaababka farsamaysan ee dadweynaha aduunka oo leh xulasho Audio iyo Video. Shahaadada CCNA waa ujeeddada dhabta ah ee ku aaddan hab-nololeedkan leh calaamadahan. CCNA waa wadada muhiimka ah ee aadka ujecel oo aad u dheer si aad u qadarin leh oo aad door bidayso oo aad door bideyso mustaqbalkaaga.
Cisco waxay bixisaa tababar CCNA ah iyo xaqiijinyo kuwaas oo kuu sahli doona inaad horumar ka gaarto habka aad u shaqeysid. Barnaamijyada Cisco ee barnaamijka xaqiijinta ayaa bixiya shuruudaha shan heer -
Injineerada daruuriga ah, hoggaamiyayaasha daruuraha iyo qaab dhismeedka: Isuduwaha Associate wuxuu bixiyaa CCNA kala duwan ama Associate Network Certified Network si aad ugu diyaargarowdo. Cimilada CCNA waxay caawimaysaa injineerada daruuraha, madaxda fulinta hawada iyo injineerada qaab dhismeedka. Qorshahani waa hab la yaab leh oo wax looga qaban karo helitaanka isku-dhiska bartamaha iyo sidii loo ogaan lahaa sida si guul leh loogu kormeero dhaqdhaqaaqa horumarinta ee ku-meel-gaadhka. Qalabka la soo jeediyay waxaa lagu daraa fahamka aasaaska Cisco Cloud iyo soo bandhigista Maamulka Cisco ee laga helayo maktabadda elektarooniga ah ee Cisco.
Hawlgallada Amniga: Cyber ​​Ops CCNA waa diyaar u ah inuu kuu furo albaabyo kala duwan oo furan. Haysashada amniga kombiyuuterka waa shaqo isku day ah oo loogu talagalay waxbarashada CCNA Cyber ​​Ops kuu dejin doonto. Ka dib shahaadadan, waxaad bilaabi kartaa xirfaddaada adoo xoogga saaraya hawlgallada ammaanka. Iyadoo loo marayo Xarunta Macluumaadka CCNA, CISCO waxay bixisaa qorshe balaadhan oo kuu sahlaya inaad wakhtiga iyo lacagaha ku badbaadiso fikradaha, tusaale ahaan, server-yada u samee qaabdhismeedka, isticmaalka iyo hagaajinta. Kuwa loogu talagalay degmooyinka halka IT-da iyo qaab-dhismeedka hadda la kulmayo, CCNA Industrial waa go'aanka ugu wanaagsan. Waxay gaar ahaan muhiim u tahay ururinta, xakamaynta xakamaynta, iyo saliidda iyo gaasta.
Amniga: Tababarka kale CCNA ee CISCO siinaya waa CCNA Ammaanka. Nidaam awood u leh nabadgelyada CCNA wuxuu awood u leeyahay inuu horumariyo qaab-dhismeed nabadgelyo, oo uu dareemo khatar iyo dhexdhexaadinta khataraha. Isaga ama iyadu waxay ku fiicnaan doontaa horumarka loo isticmaalo qaab-dhismeed nabadgelyo. Khabiiro leh CCNA Routing, Cisco CCENT iyo Bedelidda, ama shahaadada CCIE waxay ku habboon tahay biilka si loogu qorsheeyo aqoonsiyada CCNA.
Wireless: Taageerada Wireless ee CCNA waxay wax ka qabtaan arrimaha khibradaha khibradda leh ee hibada leh si loo damaanad qaado in horumarka uu isticmaalo ganacsigu uu yahay mid caalami ah oo qeexan, oo la hubiyo, iyo weliba dhamaanba agagaarkaaga. Tababar noocaas ah wuxuu kordhin doonaa aqoontaada iyo qaababkaaga qaabeynta LAN, hubinta iyo baaritaanka. Waxaad awood u yeelan doontaa in aad fuliso shabakad fog oo isku xiran si aad u abaabulato iyo shabakad udub dhexaad ah. Aqoonsigaani wuxuu leeyahay dhowr ka mid ah waxyaabaha horay loo baahnaa.
Shahaadooyinka, tusaale ahaan, CCNA waxay si fiican u qaadeysaa xirfaddaada waxayna kugu sii wadi doontaa inaad sii waddo. Shahaadooyinka CCNA waxay kuu oggolaanayaan inaad beddesho hantida lagama maarmaanka u ah ku-xirnaantaada.
7 Sababaha Ku Saabsan Xirfadaha Aasaasiga ah ee CEH